धन कमाउने आश बोकेर विदेश गएकी २१ बर्षीय युवती ७ महिनाको ग’ र्भ बो के र फर्किएपछी….(भिडियो) – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/धन कमाउने आश बोकेर विदेश गएकी २१ बर्षीय युवती ७ महिनाको ग’ र्भ बो के र फर्किएपछी….(भिडियो)
परिवारलाई सुखसँग पाल्ने सपना बोकेर विदेशिएकी इलामको दानाबारीकी २१ बर्षीया ललिता परियार यतिबेला ७ महिनाको ग’र्भ बो केर न्यायको खोजीमा छिन् ।
२ बर्ष बैदेशिक रोजगारीको क्रममा कतारमा काम गरेर फर्किकी ललिताको पेटमा अहिले ७ महिनाको बच्चा हु’र्कि रहेको छ ।ललिता इलाम घर जान सकेकी छैन । परिवारले उनलाई स्वीकार गर्ने अवस्था नभएकाले झापाको विर्तामोडमा डेरामा बस्दै आएकी छिन् ।
कतारमै रहँदा ललिताको मुगुका अपिल ब’मसँग प्रेम बस्यो । उनीहरुबीच शा’रीरिक सम्बन्ध पनि भयो । सोही क्रममा उनीहरुको ग’र्भ बस्यो ।आफु अ’विवाहित रहेको भन्दै कपिलले ललितालाई प्रे’मजालमा पारे ।
त्यसपछि उनीहरुबीचको प्रेम झाँ’गिदै गयो । कतारबाट कपिल घर फर्किए । त्यसपछि ललिताले थाहा पाइन्, आफुलाई धो’का दि एको । कपिलको श्रीमति र छोरीसमेत रहेको उनले थाहा पाइन् ।त्यतिखेर ललिताको पे टमा कपिलको बच्चा हुर्किँदै गएको थियो ।
ललिताले त्यो बच्चालाई जन्म दिने नि’र्णय गरिन् । र, घर फर्किन् । त्यसपछि कपिल सम्पर्क बि’हीन बने । पटक पटक सम्पर्क गर्दासमेत कपिलकी श्री’मतिले फोन उठाउने गरेकी छिन् ।यतिबेला ७ महिनाको ग’र्भ बोकेर ललिता न्याय मागिरहेकी छिन् ।
कुनै संघसंस्थाले उनको न्यायका लागि पहल गरेको छैन । आफ्ना बेदनाहरु मिडियामार्फत पोखिरहेकी छिन् । न्या’यका लागि सहयोगका लागि सबै पक्षमा उनले अपिल गरेकी छिन् ।